Faah-faahin ka soo baxeysa Qaraxa Ismiidaaminta ee Gaalkacyo ka dhacay iyo Shabaab oo sheegtay(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax Ismiidaamin oo nin waxyaabaha Qarxa isku soo xiray uu ka geystay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, gaar ahaan inta u dhaxeysa Hoteelada Capital iyo Unlaaye oo ku yaallo Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo.
Tirada dhimashada ayaa la sheegayaa inay gaareyso ilaa 8 ruux oo uu ku jiro ruuxii Ismiidaamiyay, Sarkaal Puntland u qaabilsanaa dhanka Maaliyada Gobolka Mudug ayaa la sheegay inuu ka mid noqday dadka Qaraxaasi ku dhintay.
Ninka Bartilmaameedka Qaraxa uu ahaa ayaa la aaminsan yahay inuu yahay Xisaabiyihii Wasaaradda Maaliyada Gobalka Mudug ee Puntland Siciid Cali Yuusuf oo ku magac dheeraa (Gaadayare).
Gaadayare iyo qaar ka tirsan ciidankii ilaalada u ahaa ayaa halkaasi ku geeriyooday, iyadoo dad kale oo shacab ah oo goobta ku sugnaa ay dhinteen.
Al Shabaab oo sheegatay masuuliyada weerarkaan ayaa waxa ay sheegeen inay la beegsadeen weerarka Ismiidaaminta ah Siciid Cali Yuusuf.
Afhayeenka dhanka howlgalada Ururka Al Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa u sheegay Warbaahinta ciidan ilaalo u ahaa Sarkaalkaasi iyo isagaba inay halkaasi ku dileen.
Wuxuu sheegay Gaadayare inuu ahaa nin dhibaato ku haayay shacabka Gobolka Mudug, balse maanta si rasmi ah ugu hor wareejiyeen.